काम सके त्यसपछि अजितालाई लगेर फा’ले ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/काम सके त्यसपछि अजितालाई लगेर फा’ले !
3,292 1 minute read
काठमाडौँ । गत माघ ४ गते बिहान मृ त अवस्थामा फेला परेका तेस्रो लिंगी अजिता भुजेलको ह त्या भएको पुष्टि भएको छ । उक्त घ ट नामा संलग्न पाँच जनालाई प्रहरी प क्रा उ गरी सार्वजनिक गरेको छ । प्रहरीले अझै दुई जना भने फ रा र रहेको जनाएको छ ।
हेटौंडाको क्याम्पडाँडामा भुजेलको श व फेला परेको थियो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका –११ की तेस्रो लिङ्गी अजिता भुजेलको भएको भन्दै परिवारका सदस्य र निलहिरा समाजले अनुसन्धानको माग राखेका थिए । प्रहरीले पनि घ ट ना सं’का’स्पद रहेको भन्दै अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
घ ट ना भएको १५ दिन पछि संलग्नहरु सार्वजनिक भएक हुन् । अजितामाथि घ ट ना घ टा एर लगिएको मोवाइल ‘अन’ भएपछि प्रहरी यिनीहरु समक्ष पुग्न सफल भएको थियो । अजिता माथि ४ जनाले स म्पर्क गरी घ ट ना घ टा ए को प्रहरी अनुसन्धानवाट खुलेको छ ।
सुरुमा सहमतिमै यौ न स म्पर्क भएको र पछि पैसा लेनदेनको विषयमा कुरा नमिले पछि उनीहरुले अजिताको गरेका थिए । ७ हजार रुपैयामा गर्ने सहमति पछि सबै जनाले पा’लैपा’लो स म्पर्क राखे । तर पछि पैसा तिर्ने बेलामा कुरा नमिले पछि उनीहरुले अजितालाइ सकिदिएको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
प क्रा उ पर्नेहरुमा हेटौंडा–९ का १८ वर्षीय सिमोन परियार, हेटौंडा–४ का २५ वर्षीय सुशील थापा मगर, हेटौंडा–११ की २० वर्षीया एलिसा पाख्रिन, हेटौंडा–४ का २४ वर्षीय आशिष बल र हेटौंडा–४ का २१ वर्षीय बुद्ध लामा रहेका छन् ।
प्रहरीका अनुसार सिमोन परियारले ल्याएको ना ६ ख ६५२७ नम्बरको ट्रकको क्याबिनमा अजितालाई चारैजनाले स म्पर्क गरेका थिए । पैसामा कुरा नमिलेपछि ट्रकभित्रै यो घ ट ना घ टा एको प्रहरी अनुसन्धानवाट देखिएको छ । घ ट ना घ टेपछि श व उनीहरुले ट्रकमै राखेर क्याम्पाडाँडामा लगेर फा लेको प्रहरीसमक्ष बयान दिएका छन् ।
अजिताको गरेपछि अजिताकै मोवाइल आशिषले लगेका थिए । त्यसपछि आशिषले आफ्नी पत्नी एलिसालाई अजिताको मोवाइल दिए । एलिसालाई त्यो मोवाइल कसरी आयो भन्ने थाहा भएन । उनले मोवाइल ‘अन’ गरिन् । अजिताको मोवाइल ‘अन’ भएपछि प्रहरीले त्यसको संकेत पायो । मोवाइलले देखाएको लोकेशनका आधारमा उनीहरु प क्रा उ परेका हुन् ।
कोरोना लागेका दुई जनाबारे टेकु अस्पतालबाट आयो खुसीको खबर !
मिहनेती सुरक्षागार्ड जसले ड्युटीमै पढेर पास गरे विश्वविद्यालयको परीक्षा
दीपाश्री निरौला भन्छिन् – हामी नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई बिस्तार गर्न आएका हौ‌ँ
दिलिप रायमाझी, गौरी मल्ल जज रहेको ‘डान्सिङ्ग विथ द स्टार्स नेपाल’ को स्टेजमा राजेश हमालको इन्ट्री